Mandritra ny fotoana voafetra ihany dia azonao atao ny mahazo ny kopia ny Cookie Ketogenika Tasty tsotra Maimaimpoana amin'ny Charge izay rehetra tsy maintsy ataonao dia sarany kely ny fandefasana sy ny fikarakarana.
Ity takelaka Ketogenic tsotra ity dia ahitana resep-ketogen matsiro 150!
Misy kopia ara-batana an'ity boky ity dia misy maimaimpoana maimaim-poana izay rehetra angatahin'izy ireo dia ny mandoa vola kely ho an'ny fandefasana sy ny fikarakarana. Raiso ny kopinao amin'ity boky mahalaiso keto maimaim-poana ity Eto!
Eritreritra 5 momba “Tadiavo ny FREE Keto Cookbook"
Raha manana fanontaniana mifandraika amin'ny fandefasana ny boky Bacon & Butter Keto ianao dia ho afaka hanampy anao izy ireo support@ketoresource.org na azonao atao ihany koa ny manolo-tena amin'ny ekipa mpanohana an'i Clickbank amin'ny https://www.clickbank.com/corp/support/
Nanafatra tamin'ny 2/8/18 aho ary nandoa ny fandefasana. Mbola tsy nahazo ny boky ara-batana hatramin'ny 3/23/18.